आफैंको मामला र आत्माको आत्मा कहिल्यै भेट्न सक्दैन। दुई मध्ये एक गायब हुनु पर्छ; त्यहाँ दुबै को लागी कुनै ठाउँ छैन।
काश, सबै मानिसहरुले अलाया अधिकार गर्नुपर्दछ, महान आत्माको साथ एक हुनु पर्छ, र त्यो स्वामित्व पाउनुपर्दा, अलाया यति थोरै फाइदा लिन सक्दछन्!
हेर्नुहोस् कसरी चन्द्रमाजस्तै शान्त छालहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, अलाया साना र ठूलाले प्रतिबिम्बित हुन्छ, सबैभन्दा सानो परमाणुमा दर्पण हुन्छ, तैपनि सबैको हृदयसम्म पुग्न असफल हुन्छ। काश, उपहारले केही थोरैले फाइदा लिनुपर्दछ, सत्य सिक्ने अनमोल वरदान, अवस्थित चीजहरूको सही धारणा, अवस्थितिको ज्ञान!
The मौनताको आवाज।
Vol। 1 जून, 1905। नम्बर 9
शब्दले भनेझैं "पदार्थ" भनेको त्यो हो जुन मुनि वा अन्तर्गत खडा हुन्छ। जुन पदार्थ अन्तर्निहित, वा मुनि रहन्छ, प्रकट ब्रह्माण्ड हो।
पुरातन आर्यहरूले प्रयोग गरेको शब्द "मूलप्रकृति" ले हाम्रो अर्थ पदार्थ भन्दा पनि उत्तम अर्थ राख्छ। "Mula" यसको मतलब जरा, "प्रकृति" प्रकृति वा पदार्थ। मूलप्रकृति यसैले, कि उत्पत्ति वा जरा जहाँबाट प्रकृति वा पदार्थ आउँदछ। यो अर्थमा हामी शब्द पदार्थ प्रयोग गर्छौं।
पदार्थ अनन्त र एकरूप हो। यो सबै अभिव्यक्तिको स्रोत र मूल हो। पदार्थको आफैंलाई पहिचान गर्ने सम्भावना हुन्छ, र यसरी चेतना बन्ने। पदार्थ पदार्थको होइन, तर जराबाट जसमा स्प्रि। हुन्छ। पदार्थ इन्द्रियलाई कहिले पनि प्रकट हुँदैन, किनकि इन्द्रियहरूले यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। तर यसमा ध्यान गर्दा दिमाग पदार्थको स्थितिमा जान सक्छ र त्यहाँ यसलाई महसुस हुन्छ। इन्द्रियहरूले के बुझ्छन् त्यो पदार्थ होइन, तर पदार्थबाट निम्नतम गतिको उप-प्रभाग, तिनीहरूको विभिन्न संयोजनहरूमा।
सम्पूर्ण पदार्थ चेतना सदासर्वदा रहन्छ। पदार्थमा सदाको लागि चेतना हो आत्म गति। सेल्फ मोशन अन्य गतिहरूको माध्यमबाट पदार्थको अभिव्यक्तिको कारण हो। पदार्थ सदा एकै हुन्छ, पदार्थको रूपमा, तर यो विश्वव्यापी गति मार्फत आत्मा-पदार्थमा अनुवाद गरिएको छ। आत्मा-पदार्थ आणविक हो। आत्मा-पदार्थ ब्रह्माण्ड, संसार र मानिसहरुको सुरुवात हो। गतिहरूको अन्तरक्रियाको कारण आत्मा-पदार्थ केहि राज्यहरू वा सर्तहरूमा अनुवाद हुन्छ। एक पदार्थ दुई हुन्छ, र यो द्वैद्व प्रकटको सम्पूर्ण अवधिमा प्रबल हुन्छ। चक्रको तल्लो तल्लोमा रहेको सबैभन्दा आध्यात्मिकबाट सबैभन्दा सामग्रीमा, त्यसपछि विश्वव्यापी गतिमा फिर्ता।
आत्मा-पदार्थले दुई अभिन्न अपरिवर्तनीय विरोधाभासहरू, वा पोलहरू, सबै अभिव्यक्तिको उपस्थिति गठन गर्दछ। यसको पहिलो हटाउँदा पदार्थबाट आत्मा-पदार्थ आत्माको रूपमा देखा पर्दछ। यसको सातौं हटावट बाहिर वा बाहिर हाम्रो समग्र वस्तु हो। पदार्थ पदार्थको त्यो पक्ष हो जुन उत्प्रेरित हुन्छ, मोल्ड हुन्छ र आफुको अर्को पोलले आकार दिन्छ जसलाई आत्मा भनिन्छ। आत्मा पदार्थको त्यो पक्ष हो जुन अन्य ध्रुवलाई सार्दछ, उर्जा दिन्छ, र आकार दिन्छ जुन आफैको ध्रुवलाई पदार्थ भनिन्छ।
यसको बाहिरी वा तल्लो गतिमा त्यो पदार्थ थियो, तर जुन अहिले द्वैत आत्मा-विषय हो, प्रभावित छ, र निर्देशन, आवेग र भाग्य, तल्लो राज्यदेखि मानिससम्म, सिंथेटिक गतिद्वारा। यदि आत्मा-पदार्थ समान रूपले सन्तुलित छ भने यसले स्वयं गतिलाई पहिचान गर्दछ, जुन सचेत पदार्थको उच्च अभिव्यक्ति हो, र अमर, सारभूत, र दिव्य हो। यदि, तथापि, दिमाग वा विश्लेषक गति सन्तुलित हुन र आत्म गति संग पहिचान गर्न असफल, यो बारम्बार आक्रमण र विकास को लगातार आवर्ती अवधिको माध्यमबाट चक्कर आयो।
प्रत्येक शरीर वा फारम यसको माथिको सिद्धान्तको लागि वाहन हो, र शरीरलाई सूचित गर्ने सिद्धान्त बदल्दछ वा तल यसको फाराम। आध्यात्मिक विकास मा पदार्थ को तल्लो देखि उच्च डिग्री को रूपान्तरण मा शामेल छ; प्रत्येक पोशाक चेतना को प्रतिबिंब वा अभिव्यक्ति को लागी एक वाहन हुन। प्राप्ति को रहस्य निर्माण र शरीर वा फार्म संग संलग्न हुन मा छैन, तर गाडी को मूल्यवान मा मात्र सबै प्रयास को अन्तिम वस्तु को प्राप्त को एक साधन - चेतना।
चेतना कुनै पनि हिसाबले संसारको मुक्तिदाता भन्दा माटोको डल्लामा भिन्न हुँदैन। चेतना परिवर्तन गर्न सक्दैन, किनकि यो परिवर्तनहीन हो। तर चेतना अभिव्यक्तिको सवारी साधन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसोभए त्यो वस्तुको भौतिक अवस्था र रूपमा बुद्ध वा क्रिष्टको वस्त्र जस्तो चेतना प्रतिबिम्बित गर्न र अभिव्यक्त गर्न सक्षम हुँदैन।
ब्रह्माण्डहरू असीम समयको रूपमा आउँछन् र जान्छन्, त्यस क्रममा यो विषयलाई सबैभन्दा सरल र अविकसित राज्यबाट उच्चशिक्षाको उच्च तहसम्म काम गर्न सकिन्छ: बालुवाको गेडा वा प्रकृति स्प्रिटबाट, प्रधान दूत वा विश्वव्यापी अज्ञात देवता। पदार्थलाई आत्मा-पदार्थको रूपमा रूपान्तरणको उद्देश्य र आत्मा-पदार्थको पदार्थको विकासको एकमात्र उद्देश्य हो: चेतनाको प्राप्ति।